DHAGEYSO: Qaar ka mid ah shacabka Nairobi oo ay saaka la soo daristay saameyn dhanka gaadiidka ah – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO: Qaar ka mid ah shacabka Nairobi oo ay saaka la soo daristay saameyn dhanka gaadiidka ah
Shacabka ku nool xaafadaha Umoja, Dohnholm, Buru Buru, Kayole iyo kuwa kale ee dariska la ah ee magaaladatani Nairobi ayay saaka ku timid caqabad dhanka gaadiidka ah kadib markii ay shaqooyinkoodi hakad geliyeen wadayaasha mataatuuda.
Qaar ka mid ah mulkiilayaasha iyo wadayaasha baabuurta ay dadweynaha ku safraan ee u kala goosha xaafadaha kala duwan ayaa walaac ka muujiyay in mar kale wadanka laga dhaqangelinayo shuruuc loogu magacdaray wasiirkii hore ee gaadiika John Michuki.
Waxay sheegeen in ciidamada booliska ay sameyeen howlgalo lagu baacsanayo baabuurta aanan lahayn qalabka lagu xakameeyo xawaaraha uu ku socdo gaariga.
Hasa ahaate booliska ayaa dhankooda sheegaya inay howlgalada yihiin kuwo iska caadi ah oo aanan cidna lagu bartilmaameedsan.
Dhanka kale wadayaasha mootooyinka ayaa sheegaya inuu ganacsigooda kobcay oo maanta ay maanta helayaan dhaqaale dheeraad ah.
Tallaabada ay qaadeen gaadiidleyda ayaa saameyn ku yeelatay rakaabka maadaama kuwa kale ay sara u qaadeen qarashaadka ama nooliga taasi oo sidatan cabasho looga muujiyay
Ciidamada booliska ee dalka ayaa laga bilaabo 12-ka bishan oo isniin ah ku tallaaba qaadi doono dhaqangelinta shuruucda wadooyinka ee la doonaya in lagu xakameeyo shiilaka laga soo tabiyo qeybaha kala duwan ee dalka.
Bayaan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ayaa lagu xusay in shirkadaha baabuurta loo qabanayo ugu dambeyn 12-ka bishan si ay si buuxda u fuliyaan arrimaha laga doonayo.
Waxay wararku intaasi ku darayaan in shalay gacanta lagu dhigay ugu yaraan 63 baabuur ah iyadoo maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka ee NTSA uu sheegayo in howlgalada ay sii socon doonaan.
Wadayaasha baabuurta iyo shakhsiyaadka caawiya ayaa laga doonaya inay xirtaan labis lagu aqoonsan karo.
Sido kale waxaa looga fadhiyaa inay soo bandhigaan ama muujiyaan sawiradooda.
Waxyaabaha kale ee dib loo dhaqangelinayo ayaa ah xirashada suunka ku dheggan kursiga si loo xoojiyo badqabka rakaabka.
← Messi oo diyaar u ah kulan Inter Milan ee champion league ga
Maraykanka oo mar kale cunaqabateyn ku soo rogay iiraan →